Kana uchinyora nyaya yehupenyu hwako, usarega mumwe munhu achibata chinyoreso. - Harley Davidson - Anodzokorora Pedia
Hupenyu hwakakosha. Izvo zvakakosha kuti tishandise zvese zvishoma zvaro. Pakati pekukwira nekuoma, isu tinofanira kuyeuka kuti tisatomborega kudzora hupenyu hwedu. Izvo zvakakosha kuti tizive zvinangwa nezvishuvo zvedu. Izvo zvakakosha kuti uve neruzivo uye kuve wakasununguka pakuedza zvinhu zvitsva kuti tikwanise kunyatsoziva zvido zvedu uye nekuruka zviroto zvedu.
Pachave nematambudziko munzira, asi ndezvedu kuti tirangarira kuti tinofanirwa kuzadzisa zviroto zvedu. Izvi zvinotungamira kuhupenyu hunogutsa uye tichave nechokwadi chekuti tiri kurarama hupenyu hune michero.
Pachave nevanhu vakasiyana avo vanozoita sekusanganisa patiri. Asi isu hatifanire kurega pesvedzero iyi ishandurwa mukuvapa simba rekutungamira hupenyu hwedu. Unogona kufunga kuti munhu wacho ane huchenjeri hwako. Zvingave zvechokwadi zvakare. Asi kutadza kudzora hupenyu hwako kunoita kuti iwe uite zvinhu nenzira izvo mumwe munhu angadai akazviita.
Unorasikirwa nehunyanzvi hwako uye kugona kwako kuzviriritira. Iwe unova unotsamira uye unonzwa kurasikirwa kana iwe uri wega. Naizvozvo, zvakakosha kuva nevamwe sekusimudzira asi uine zvizere kutonga kwedu pachedu.
Iyo peni yekunyora iyo nyaya yehupenyu hwako iri muruoko rwako uye iwe unogona kuapa kutungamira wakasununguka. Unogona kukanganisa, asi haunzwi uine mhosva yekusavimba pachako nekuti wazviitira wega. Iwe uchadzidza kubva pazviri, kuenderera mberi nekudzingira kubudirira, zvese zvake kunge munhu anozvivimba.
Akanaka Quotes PaHupenyu
Akanakisa Mapfupi Makotesheni
Kukurudzira Quotes Nezve Hupenyu
Inokurudzira Yekunyora Quotes
Positive Quotes Nezve Hupenyu
Ipfungwa Dzakanaka Nezve Hupenyu
Quotes Nezvekuverenga Uye Kunyora
Kutaura nezve Hupenyu
Short Quotes Nezve Hupenyu
Nyaya Quotes Nezve Hupenyu
Mazwi Euchenjeri Pahupenyu